शरीरको दुखाई कम गर्न यस्ता खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ !
जोर्नी दुखाईका लागि पछिल्लो अध्ययनअनुसार चार महिलामा एक महिला आर्थराइटिसस, क्रोनिक टाउको दुखाई तथा जोर्नी दुखाईबाट पीडित छन् । यस्ता समस्याका लागि चेरी उपयोगी मानिएको छ । चेरीलाई रातो बनाउन मद्दत गर्ने एन्थोसाइनिन्स नामक तत्व पीडा घटाउनमा सहयोगी हुन्छन् ।
तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने १०१ सुत्रहरु
एजेन्सी । विश्वमा अनगिन्ती अन्वेषण तथा आविष्कारहरु दैनिक रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । विश्वमा जुनसुकै ठाउँबाट छिनभरमै वार्तालाप गर्न सकिन्छ । यसका साथै यी आविष्कारहरुले पूरा विश्व नै साँघुरो बनाएको छ । यी सबैको पछाडि यस्ता मानिसहरु पनि रहेका छन् जो आफ्नो विचार तथा नजरले हाम्रो भोलिको आकार दिने क्षमता राख्दछन् । जसबारे यहाँ जानकारी लिऔं ।
अफिसमा नगर्नुहाेस् यस्ताे गल्ती, स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ नकारात्मक असर
एजेन्सी । कामकाजी मानिसले अफिसमा गर्ने केही क्रियाकलाप ‘अस्वस्थ्य बानी’ भित्र पर्छन् । जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेका हुन्छन् ।
दाँतको सुरक्षाको लागि गर्न नहुने ८ गल्ती
एजेन्सी । हामीले आफ्नो दाँतको स्वास्थ, सरसफाइ र यसको सुरक्षामा ध्यान दिएनौं भने दाँत दुख्ने, किरा लाग्ने र दाँत झर्ने, गिजा दुख्ने आदि समस्याहरु आइलाग्छन् ।
दम रोगीले के खाने के नखाने ?
दम दीर्घ रोग भएको कारणले गर्दा यसको नियन्त्रणको लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खाने कुरामा ध्यान नदिदा दम रोगी झनै कमजोर बन्दै जान्छन् । दमको समस्या बढ्न नदिनको लागि बिरामीहरुले शक्तिवर्दक खाना खानु राम्रो हुन्छ । यसैगरी दम रोगीले चिल्लो खानेकुरा खानमा पनि बल गर्नुपर्छ ।
रुघाखोकीबाट बच्ने उपायहरु
काठमाडौं । जाडोयाममा रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना बढी रहन्छ । संक्रमित व्यक्तिले बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा मुखबाट निस्कने कीटाणु हावाका माध्यमबाट वातावरणमा फैलिन्छन् । मौसमी रुघाखोकीका कारण विशेषगरी रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बालबालिका, गर्भवती र बुढाबुढीमा छिटो संक्रमण फैलिन्छ । यस रुघाखोबीबाट बच्न निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
जाडो याममा हातको हेरचाह यसरी गर्नुहोस्...
पञ्जा लगाउनुपर्छ – जाडोमा तपाईको हातलाई न्यानो मात्र प्रदान गर्दैन, हातको छालालाई सुख्खा हुनबाट पनि जोगाउँछ । घरबाट बाहिर निस्कदा पञ्जा लगाउने गर्नुपर्छ । चिसो हावाले छालालाई हानी पु¥याउँछ र हात फुट्छ । पञ्जाले हातलाई चिसो हावाबाट बचाउँछ ।
जाडोमा फाइदा पु–याउने खानेकुरा....
सखर – गुड पनि भनिइने सखरले शरीरमा रगतको कमी हुन दिदैन । यसमा भरपुर मात्रामा आइरन फस्फोरस, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम आदि पाइन्छन् । तातो दुधमा गुड लागेर खाने गर्नाले वजन कम हुन्छ ।
यस्तो रहेको छ बुधबारको तपाईको भाग्य–मंसिर १८ गते
वि.सं.२०७६ साल मंसिर १८ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०१९ डिसेम्बर ०४ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४१ । मार्गशुक्ल पक्ष । काठमाडौंमा सूर्योदय ०६ बजेर ४० मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०६ मिनेट ।
जाडो मौसममा विभिन्न रोगबाट बच्न यसो गर्नुस्
मुलुकभर जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ । काठमाडौँ लगायत देशभर जाडो बढ्दैछ । विषेश गरि जाडोमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान पु–याउनै पर्दछ । जाडो महिनामा कयौँ मानिसहरुलाई नाक बन्द हुने, नाकबाट पानी बग्ने आदि समस्या देखापर्दछ ।